MasterCard's CFO: Cryptocurrency ukuthenga ukonyuswa imali yethu lwabathengi - Blockchain News
MasterCard i-CFO: Cryptocurrency ukuthenga ukonyuswa imali yethu lwabathengi
Mastercard iye ukwanda kokusetyenziswa ngokuyinxenye ngenxa kubasebenzisi kokuthenga cryptocurrency.
imiqulu cross-umda Inethiwekhi yentlawulo yakhe – umlinganiselo imali umthengi aphesheya – aye enyuka 22 ekhulwini ukuze kuthi ga ngoku kulo nyaka, ikhuthazwa inxenye abaxhasi basebenzisa amakhadi abo ukuba bathenge ezimalini digital, Wathi IGosa eliyiNtloko lezeMali Martina Hund-Mejean ngoLwesine. imali Higher ekuhambeni eYurophu nayo negalelo, uthe.
"Nje ukuba kucace, ke musa phindela okanye ukulungisa imicimbi cryptocurrency kwi network,"Hund-Mejean wathi ucingo abahlaziyi. "Izicwangciso zethu sukucinga olu hlobo lomsebenzi luya kuqhubeka njengoko kungekho umgca kwamehlo kwindlela bamakhadi ziya ukujonga cryptocurrencies kwixesha elizayo."
kwi Ripples 16%, all Eyes on C...
Ixabiso yama- uvukile 16%...
Canada lokuqala & only regu...
Post Previous:Iziveliso chips .GOKO ukusuka Samsung
Post Next:UPS iifayile lomenzi ukwamkela Bitcoin for neelokhari